Caalamka Online » Tabaraha Arsinal “Arsene Wenger” Oo Lagu Casuumay Xafladda Caleemo Saarka Madaxweynaha Cusub Ee Dalka Liberia George Weah
Tabaraha Arsinal “Arsene Wenger” Oo Lagu Casuumay Xafladda Caleemo Saarka Madaxweynaha Cusub Ee Dalka Liberia George Weah
ARSENE WENGER ayaa lagu martiqaaday xaflada caleeemo saarka madaxweynaha cusub ee dalka ee Liberia George Weah.
Ciyaaryahankii hore ee ku guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or Weah oo 51 jir ah ayaa kasoo hoos ciyaaray tababare Wenger intii u dhexeysay 1988 illaa 1992-dii, ka hor inta uusan ku biirin siyaasadda.
Ciyaaryahankii hore ee AC Milan ayaa dhawaan ku guuleystay doorashadii madaxweynenimada ee dalkiisa Liberia kadib markii uu helay codad gaaraya 61.5 boqolkiiba codadka la dhiibtay.
Madaxweynaha cusub ee dalka Liberia George Weah ayaa la qaban doonaa xafladiisa caleemo saarka 22 bishaan Janaayo, iyadoo lagu casuumay tababaraha Arsenal.
Si kastaba ha ahaatee, Wenger ayaa ku kaftamay inuu kaliya awoodi doono inuu ka qeyb galo xafladaas haddii ganaax ku aadan murankii garsoorayaasha uu la galay todobaadyadii la soo dhaafay la saaro.
Haatan Tababaraha reer France oo 68 sanno jir ah ayaa ganaax afar kulan ah gudan doona inta lagu jiro bisha Janaayo ee sannadkan, kadib markii lagu soo oogay dacwad ka dhan ah garsoorayaasha Ingiriiska.
Weah ayaa la caleemo saari doona inta u dhaxeysa kulanka Arsenal Premier League kula ciyaareyso Crystal Palace 20ka Janaayo iyo kulanka semi-finalka Carabao Cup oo ay ku wajahayaan Gunners kooxda Chelsea 24ka January.
Wenger ayaa yiri: “Marka aad fiiriso George Weah noloshiisa waa filim, waa wax aan la rumeysan karin, waa filim fantastik ah.
“Waxaan ku arkay Monaco, isaga oo isha ku haya arimaha kubadda cagta, ma garanayo qofka aan ku qiimeeyo ciyaaryahan ahaan.
George Weah oo noqday 1995tii ciyaaryahanka ugu fiican adduunka, ayaa haatan ah madaxweynaha dalkiisa Liberia.
“Mar walba wuxuu maskax ahaan ahaa mid xoog leh, wuxuu ku qanacsanaa shaqadiisa caadiga ah waqtigii aan la joogay ayuu yiri Wenger.